Messi oo codsi aan horey looga baran u gudbiyay tababare Ernesto Valverde
Sunday, November 18th, 2018 - 15:54:53
Wednesday November 08, 2017 - 23:21:05 in Wararka by Hussein Hadafow
Hogaamiyaha kooxda Barcelona LIONEL MESSI ayaa tababaraha kooxdiisa ka dalbaday inuu Nasiyo maadaama uu aad u daalay.
Messi 30- jira ayaa u muuqada mid aad u daalay maadaama uu ciyaaray kulanka walba oo ay kooxdiisa ciyaartay xilli- ciyaareedkan marka laga soo tago hal kulan oo ka tirsan Copa del Rey oo ay kooxdiisu la ciyaartay kooxda Real Murcia.
Sida lagu qoray El Mundo Deportivo Mucjisada xulka Argentina ayaa hada tababaraha kooxdiisa Barca Ernesto Valverde iyo tababaraha xulkiisa Argentina Jorge Sampaoli ka dalbaday ineey Nasiyaan maadaama uu aad u daalay.
Ernesto Valverde oo ah hogaamiyaha kooxda Barca ayaa hada ku fikirayaa inuu aqbalo codsiga Lionel Messi ee ah in la nasiyo wuxuuna doonayaa inuu ka saaro liiska ciyaartoyda kooxda Barca ee ka hortagi doonta kooxaha Leganes iyo Valencia.
Ciyaaryahan Lionel Andrés Messi ayaa hada ku jira qaab ciyaareed qurux badan wuxuuna kooxdiisa u ansixiyey 16 gool 17 kulan oo uu guud ahaan garoonka usoo galay xilli- ciyaareedka hada aynu ku jirno ee 2017- 2018.